नेकपा माओवादी केन्द्रले जनसाँस्कृतिक कार्यक्रम सहित २६ औ जनदिवस मनायो - Jerung Films
नेकपा माओवादी केन्द्रले जनसाँस्कृतिक कार्यक्रम सहित २६ औ जनदिवस मनायो
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 13 Feb 2021
१,फागुण–काठमाण्डौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न जनसाँस्कृतिक कार्यक्रम सहित २६ औ जनदिवस मनाएको छ । व.स. २०५२ साल फागुण १ गतेबाट जनयुद्धको थालनी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र दश बर्षे जनयुद्धमा होमिएका थिए ।
त्यो अवधिमा राज्यबाट बेपत्ता भएका तथा हत्या भएका शहिदहरुको सम्झनामा हरेक बर्षको फागुण १ गते जनदिवस मनाउने गरिन्छ । शान्तिप्रक्रिया पछि वि.स. २०६३ सालमा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र सत्तामा पुगेका थिए । तर सेनाप्रमुख रुकुमांगत कटुवालसँगको बिवाद चुलिदै गएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजिनामा दिएर सत्ताबाटै बाहिरीने निधो गरेका थिए ।
त्सपछि नेपाली काँग्रेस,नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हँुदै आलोपालो अस्थायी सरकार चलाएका थिए । वि।स। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको थियो । त्यो चुनावमा तत्कालिन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गरेर प्रचण्डले माओवादी केन्द्र त्यागे । उनी पूर्ण रुपले बर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर नयाँ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी स्थापना तिर लागे । त्यो पनि लामो समय टिकेन ।
माओवादी टुक्राटुक्रा भएर छरिए । तर गोपाल किराँती आफ्नो अधिक अडाँनबाट पछि नहटेपछि उनी कुनै पनि पार्टीमा समाहित हुनु भएन । अन्तत कोमामा पुगी सकेको माओवादी केन्द्रलाई उनले फेरि पनि व्यूँझाउने निर्णय गरे ।
त्यही पार्टीले आज विभिन्न जनसाँस्कृतिक कार्यक्रम सहित शान्तिनगर सुकुम्बासी टोलमा जनदिवस मनाए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय कलाकारहरु शम्भु राई,मिना राई,प्रदीप देवान,बन्धना तामाङ तथा हाँस्यकलाकारहरु रहेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँती र राजन तिमल्सिनाले शहिदहरुलाई सम्झना गर्दै श्र्रद्धाञ्जली ज्ञापण गरेका थिए । तानाशाही शासन खड्ग ओलीले चलाई रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीले आरोप लगाए ।
अहिलेको सरकारले सर्बहारा बर्गलाई नसमेटिएको पनि किराँतीले आरोप लगाए । अहिले सम्म जनयुद्ध मात्र भएको र अब पनि यसरी तानाशाही शासन भयो भने महानजनयुद्धको फेरि सुरुवाट हँुने पनि किराँतीले बताए । सुकुम्बासीलाई सरकारले विना व्यावस्था र विना बिकल्प कुनै पनि हालतमा आफ्नो स्थानबाट हटाउन नमिल्ने पनि उनले बताए ।